Sacuudi Carabiya, Isbeddelka Taariikhiga ah: Haweenka oo gaadiidka kaxayn doona – Kasmo Newspaper
Sacuudi Carabiya, Isbeddelka Taariikhiga ah: Haweenka oo gaadiidka kaxayn doona
Updated - September 27, 2017 2:39 pm GMT
London (Kasmo), Dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin-Salman ayaa qaaday tillaabo taxaddi ku ah wadaaddada isaga oo meesha ka saaray mid ka mid ah awaamiirta loogu nacaybka badanyahay dalkaas.
Haweenka ayaa markii u horreysay loo oggolaanayaa kaxaynta gaadiidka, kacaan taariikhi ah, raadna ku yeelan doona nolosha bulshada, caadooyinka iyo xitaa dhaqaalaha.
Boqollaal kun oo darawaliin ah oo dibadda laga keenay ayaa meesha ka bixi doona, taas oo qoysaska iyo hooyooyinka u sahli doonta in ay carruurtooda gawaari ku geeyaan Dugsiyada.
Mamnuucista oo lagu nasakhay Dikareeto Boqortooyo ma lahan dhaqangal dhow laakiin waxay dhalisay farxad aan la koobi Karin iyo dabbaaldegyo: Riyadh waxaa isugu soo baxay dumar iyo rag wadajira oo cayaaraya.
Amiir bin Salmaan oo 33 jir ah wuxuu ka tarjumayaa himilada jiilka cusub ee la wareegaya talada dalka, magacaabistiisa oo Odey Salman uu ku beddelay ina adeerkiisii 65 jirka ahaa,Maxamed bin Nayef, ayaana soo dedejinaysa.
Sacuudiga oo dadku 65% da’doodu ka hooseyso 30 sano, badankooduna dibadaha u safreen, waxna ku soo barteen, ciriiriga dhaqaalaha oo ka imanaya hoos u-dhaca qiimaha saliidda oo kalifaya tala-wadaagga, Boqortooyadu waa in ay la jaanqaaddoo, haddii ay rabto in ay sii dhisnaato.
Barnaamijyada dib u-habaynta dhaqaalaha ee Bin- Salman waxaa udub dhexaad u ah kordhinta ka qaybgalka haweenka ee dhanka shaqada, kaas oo maanta ku kooban 22% oo qur ah.
Awood la’aanta kaxaynta gaadiidka iyo dhaqdhaqaaq yarida haweenka, oo xadaynaya ka qaybgalkooda nolosha dadweynaha iyo shaqada, waa mid aan la jaanqaado karin isku dey kasta oo casriyeyn ah.
Dumarka Sacuudiga ayaan marnaba loo oggolayn in ay ka soo ag-dhowaadaan ragga, waxayna qabaan irrido gaar ah oo ay ka soo galaan xitaa xafiisyada Dowladda, Jaamacadaha iyo Bangiyada.
Dhacdo xanuun badan ayaa bishii March 2002dii waxaa ku dhimatay 15 gabdhood oo arday ahaa oo ku xannibmay dab ka kacay qolalkii jiifka, dugsi ku yaalla Makkah, ka dib markii Boliiska wadaadda ah ka horjoogsadeen ciidankii dab-damiska in ay gabdhaha soo badbaadiyaan, sababta iyaga oo an cabbaayad qabin dartood.
Ugu dambayntii, laysimmada ugu horreeya oo soo bixi doona, laga bilaabo Juun 2018ka, haweenka Sacuudigu waxay kaxayn doonaan gaadiidka, laakiin halganka dimuqraadiyadda iyo xuquuqdu waa ka sii dheeraan doonaa intaas.